खुशीको खबर: अन्त:त नेपालमै पेट्रोलको ठुलो खानी रहेको प्रमाण फेला, चिनियाँ टोलीलाई मिल्यो ऐतिहासिक सफलता !! (भिडियो हेर्नुहोस्) - Babal Khabar
खुशीको खबर: चीनको सहयोगमा नेपालमै पेट्रोल उत्पादन एसरी हुदै, भारतबाट आयात गर्न नपर्ने ! ( भिडियो हेर्नुहोस् ) चीन सरकारको सहयोगमा दैलेखको दुल्लुमा पेट्रोलिय पदार्थ अन्वेषणको काम तीव्र पारिएको छ ।
कुनै अवरोधको समाना गर्न नपरे आगामी २ वर्षमा नेपालीले नेपालमै उत्पादित पेट्रोलियम पदार्थको प्रयोग गर्न पाउने छन् ।चिनियाँ सरकारको सहयोगमा करिब २ अर्ब रुपैयाँको लागतमा अन्वेषणको शुरु गरिएको हो । अन्वेषणको काम हाल चाईना जियोलोजिकल सर्भेले गरिरहेको छ । दशैंपछि ड्रिलिङको काम शुरु हुने पेट्रोलियम अन्वेषण तथा प्रवर्दन केन्द्रका प्रमुख सुधिर रजौरेले बताए । उनका अनुसार सर्भे पश्चात साढे ४ किलोमिटर ड्रिलिङ गर्नुपर्ने हुन्छ यो काम अर्को वर्षको दशैंपछि शुरु गरिने छ दैलेखका पादुका, नाभीस्थान र धुलेश्वरमा बाहिरी अबस्थामै कच्चा पेट्रोलियम पदार्थ कच्चा पेट्रोलियम पदार्थ देखिएको छ । *** यो समाचार को पुरा भिडियो हेर्न तलको लिङ्कमा क्लिक गर्नुहोला ***
सरकार त्योबेला अन्तराष्ट्रिय बोलपत्रमार्फत् एउटा अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनीलाई ठेक्का दिइएको थियो । ३५ सय किलोमिटर छेडेर अन्वेषण गरिए पनि उक्त ठाउँमा औद्योगिक मात्रामा उत्पादन गर्ने गरी पेट्रोलियम पदार्थ भने भेटिएको थिएन । अहिले दैलेखको पादुका क्षेत्रमा कच्चा तेल बगिरहेका अवस्थामा पाइएको छ भने श्रीस्थानमा जमिन मुनिबाट निस्किएको ग्यास अखण्ड दीपीकाको रुपमा मन्दिरमा बालिने गरिएको छ । दैलेखका पादुका, नाभीस्थान र धुलेश्वरमा बाहिरी अबस्थामै कच्चा पेट्रोलियम पदार्थ देखिएको छ । नेपालमा पेट्रोलियम पदार्थको वितृत खोजी गरिएको यो दोस्रो पटक हो । यसभन्दा पहिले मोरङको बाहुनीमा यसखालको अन्वेषणको काम भएको थियो ।
सरकार त्योबेला अन्तराष्ट्रिय बोलपत्रमार्फत् एउटा अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनीलाई ठेक्का दिइएको थियो । चिनियाँ सरकारको सहयोगमा करिब २ अर्ब रुपैयाँको लागतमा अन्वेषणको शुरु गरिएको हो । अन्वेषणको काम हाल चाईना जियोलोजिकल सर्भेले गरिरहेको छ । दशैंपछि ड्रिलिङको काम शुरु हुने पेट्रोलियम अन्वेषण तथा प्रवर्दन केन्द्रका प्रमुख सुधिर रजौरेले बताए । नेपालमा पेट्रोलियम पदार्थको वितृत खोजी गरिएको यो दोस्रो पटक हो । यसभन्दा पहिले मोरङको बाहुनीमा यसखालको अन्वेषणको काम भएको थियो । सरकार त्योबेला अन्तराष्ट्रिय बोलपत्रमार्फत् एउटा अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनीलाई ठेक्का दिइएको थियो ।
Prevएक जोडि जंगलमै एस्तो अवस्थामा रङेहात पक्राउ, भिडियो बन्यो सर्वत्र भाईरल !! (भिडियो हेर्नुहोस्)
nextBreaking News:>> तिहारकै मुखमा भोलीदेखी फेरी सार्वजनिक सवारी साधन अनिश्चितकालका लागि बन्द घोषणा !! (सुचनासहित)